Csbio: Nanolotra fanafody mihoatra ny 2 tapitrisa Yuan avy amin'ny Heparin fanafody hanampiana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso amin'ny aretin'aretina |
Csbio: Manome fanafody maherin'ny 2 tapitrisa Yuan amin'ny Heparin fanafody hanampiana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso
Vaovao momba ny fampahalalam-baovao any Shanghai, China Secur News vaovao tamin'ny 27 febroary, Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd dia nanome mihoatra ny 2 tapitrisa yuan ho an'ny Red Cross Society ao amin'ny faritany Hubei. Ireo zava-mahadomelina ireo dia fanafody heparin rehetra ilaina haingana ho an'ny fitsaboana ireo marary voan'ny pnemonia coronary vaovao. Ireo fanafody etsy ambony dia haparitaka any amin'ny hopitaly 42 ao Hubei ao anatin'izany ny hopitaly Wuhan Jinyintan. Changshan Pharmaceutical dia nilaza fa ny famerenany ny fiaraha-monina sy ny fanolorantena fitiavana dia andraikitra lehibe tsy maintsy takian'ny orinasa voatanisa. Manoloana izao valan'aretina izao dia tena hahazo tombony manokana i Changshan Pharmaceutical ary hanao izay ho afany indrindra hanampiana amin'ny fisorohana sy hitantanana ilay valanaretina.
Talohan'io, nifandray tamin'ny governemanta teo an-toerana ny Changshan Pharmaceutical tamin'ny 29 Janoary ary nanome vola 2 tapitrisa yuan ho an'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso. Hatramin'ny fivoahan'ny Pnemonia Coronary Vaovao, nanamafy ny andraikiny i Changshan Pharmaceutical ary nanery ny hametraka ny ain'ny olona sy ny fahasalamany amin'ny toerana voalohany. Miasa mafy izahay hiantohana ny famatsiana ara-dalàna ny tsindrona heparin antonosoloolo antonagulant ao amin'ny Hubei sy ny toerana hafa. Raha tsy naverina ny lozisialy fialan-tsasatra sy ny fahazoan-dàlana dia voavaha ny olana momba ny fitaterana na inona na inona vidiny, ary maro ny tsindrona heparin mavesatra ambany no nalefa tany amin'i Wuhan sy Hubei.
Satria ny orinasam-baravarankely tokana any an-tsaha heparin manana heparin malefaka mankany amin'ny mavesatra molekiolan'ny hepatin ny tsindrona heparin ary ny rojo indostrialy heparin tanteraka, ny varotra tsindrona heparin mavesatra ambany vokarin'ny Changshan Pharmaceutical dia mitentina 40% amin'ny tsenam-pirenena. Ny vokatra fototry ny tsindrona kalsioma heparin kalsioma heparin dia namorona ny fenitry ny orinasa famokarana YBH03832006, izay avo lavitra noho ny fenitry ny firenena sy ny indostria, izay laharana voalohany amin'ny varotra an-trano mandritra ny sivy taona nifanesy.
Ekena fa ny hetsika nataon'i Changshan Pharmaceutical amin'ny fanatanterahana ny andraikiny ara-tsosialy sy ny fanampiana amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina dia nahazo fiderana sy fanohanana avy amin'ny fiaraha-monina koa. Ny mpiara-miasa amerikana ConjuChem dia nanome saron-tava 8000 ho an'ny orinasa mba hanohanana ny famokarana orinasa, ary ny mpiara-miombon'antoka hafa dia naneho ny fikasana hanolotra saron-tava. (Liu li)